IWatermark + i-iOS 8 eyandisiweyo / iApp evunyiweyo yabafoti be-iPhone: Iifoto zeWatermark Ngokukhawuleza kwiiApple zeefoto zeApple ezineentlobo ezi-6 zeWotermark | Iplum iyamangalisa
Novemba 24, 2014
IWatermark + i-iOS 8 eyandisiweyo / iApp evunyiweyo yabafoti be-iPhone: Iifoto zeWatermark Ngokukhawuleza kwiiApple zeefoto zeApple ezineentlobo ezi-6 zeWatermark.
UMHLA: Novemba 24, 2014
IPrinceville, HI-Plum emangalisayo, LLC. ubhengeze ukubakho kweWatermark + ye-iPhone / i-iPad.
Khuphela / Thenga iWatermark +
Inguqulelo yasimahla yeWatermark +
I-iWatermark + i-Essential iPhone / i-iPad, i-Watermarking App yabafoti beefoto abaqeqeshiweyo, ishishini kunye nokusetyenziswa kwesiqu.
Uhlobo olutsha lwe-iOS 8 lokusebenza olusebenza njengesixhobo esizimeleyo okanye ulwandiso lokuhlela ifoto. Ngoku, okwesihlandlo sokuqala, i-watermark ngokuthe ngqo / ngokukhawuleza ngaphakathi kwefoto ka-Apple okanye ezinye ii -apps ezisebenzisa iWatermark + njengesandiso sokuhlela ifoto se-iOS 8.
“Kangangeminyaka bendithembele kwiWatermark ukundivumela ndibeke ngokulula ilogo yam kwimifanekiso yam kanye kwi-iPhone okanye kwi-iPad yam. Nangona kunjalo, iWatermark + esandula ukukhutshwa ithatha le nkqubo iye kwinqanaba elitsha. ”
Umfoti onguTerry White
I-Adobe yeHlabathi yokuYila yokuYila yeLizwe, i-Technology Guy, iGadget Guy kunye noMbhali oBalaseleyo wokuthengisa.
Ngokulula, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngeendlela ezahlukeneyo zeewatermark ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Iimpawu zamanzi, xa zongezwe kwifoto, bonisa ukuba yenziwe kwaye yeyakho. Ukubhengeza Watermark kubaluleke kakhulu kwaye kufana nokusayina igama lakho emfanekisweni. I-watermark ibonisa ngokufihlakeleyo, nokuba ifoto yakho iya phi, yeyakho. Iimpawu zokubukela ezibonakalayo zinokusetyenziselwa ukongeza i-imeyile, i-url, umyalezo wakho, utyikityo lwakho, iikhowudi zeQR okanye imifanekiso emnandi. Iimpawu ezingabonakaliyo zingasetyenziselwa ukongeza imethadatha okanye imiyalezo ye-steganographic kuso nasiphi na isithombe.
“Ayikho enye isoftware eza naphi na kufutshane nomgangatho, iyantlukwano kunye nokusetyenziswa ngokulula njengeWatermark +. Ndiyabulela kakhulu kuPlum Amazing ngesi sixhobo sintle kangaka. ”
UHarry Janssen-FNZIPP III
I-NZIPP umfo woFoto
Umfoti wase-NZIPP wase-Auckland wonyaka ka-2011
Umfoti we-NZIPP waseNew Zealand woNyaka wama-2013
Ugqirha oqinisekisiweyo weFotohop
Isixhobo ekuphela kwaso:
* iyafumaneka kuwo onke amaqonga ama-4.
* Iindidi ezi-6 zewatermark, isicatshulwa, umzobo, utyikityo, QR, imethadatha kunye ne-steganographic.
* Ngokufumana indawo ekulula ukufikelela kuyo ii-watermark zobuqu kunye nezabantu
* Ukukhetha ngokulula kunye ukusebenzisa ii-watermark ezininzi okanye ezininzi ngaxeshanye.
* Ngomntu ngamnye okanye ibatch watermarking yeefoto.
* ngeifonti ezingama-262 zeelayibrari zakho zombhalo. 262 = 212 rhoqo + 50 iifayile zenkqubo ye-iOS. Iifonti ziyafumaneka ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
* ngesikena sokutyikitya sokungenisa utyikityo lwakho okanye enye imizobo njengejamana.
* ngombono obukhoma kunye nohlengahlengiso lwempembelelo ezinje ngesikali, i-opacity, ifonti, umbala, tint, ubungakanani, isikhundla kunye ne-angle.
* ngee-watganark ze-steganographic ezifaka naluphi na ulwazi kumfanekiso weefoto kwaye zinokufakwa ngegama eligqithisiweyo.
* ngokukhetha i-PhotoShrinkr eyonyusa imbonakalo kunye nokunyanzelwa kuthumelo ngaphandle.
“IWatermark yayiyeyona ibalaseleyo kwaye iWatermark + linyathelo eliKHULU ngaphaya koko” - D. Gantz
** Tsala ukuba uhlengahlengise indawo ye-watermark.
* Yenza iitermark zakho ezicashile okanye ukhethe kwimizekelo ebandakanyiweyo (zombini isicatshulwa kunye nemizobo).
* Kubandakanya imizekelo ephezulu ye-55. Zombini izicatshulwa (amagama, imihla, idatha yedatha, njl.njl.) Kunye nemizobo (iisiginitsha, iilogo, njl.njl).
* Ngenisa eyakho imizobo ngokuthumela ngokwakho i-imeyile enomfanekiso oqhotyoshelweyo.
* Gqibezela kwaye kulula kwisikhokelo se-app. Apha apha http://is.gd/5rjnkz
* Yaba ngokupheleleyo kwi-Facebook, i-Instagram, kwi-Intanethi, kwi-Camera Album, kwi-Clipboard okanye kwi-imeyile (ukhetho lwe-3). I-Tumblr, Flickr, Pineterest, Evernote, njl njl ixhaswe ngezandiso zokwabelana nge-iOS 8.
-Fumana ikhredithi ngendalo yakho. Sayina iifoto zakho njengabapeyinti bakudala.
ixabiso: $ 3.99, Iinguqulelo zamahhala zeTyala elizayo kungekudala
Okufunekayo: I-iPhone okanye i-iPad ene-iOS 7 okanye i-8.
IWatermark + njenge iOS 8 yokuhlela ifoto yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokujonga ngokuthe ngqo kwiApple yeApple okanye ezinye iiapp. IWatermark + sisicelo esiqhelekileyo esivumela ukusetyenziswa kwewotshi enye okanye ezininzi ngaxeshanye kwifoto nganye okanye kwibatch watch yeefoto. IWatermark + kuphela kwesicelo esineentlobo ezi-6 zee-watermark, isicatshulwa, umzobo, utyikityo, i-QR, imethadatha kunye ne-steganographic. Isicatshulwa esibhaliweyo sinokusebenzisa i-tag metadata kwaye sibe nokufikelela kwiifonti ezingama-262 ngaphezulu nangayo nayiphi na enye insiza. Iimpawu zokubukela ezibonakalayo zivumela abasebenzisi ukuba bahlengahlengise isikali, i-opacity, ifonti, umbala, ibala, ubungakanani, indawo kunye ne-engile. Ngaphandle kwee-watermark ezibonakalayo ezi-4 kukho ii-watermark ezingabonakaliyo ezi-2 ezinokufaka iziqinisekiso zeefoto kwifayile kunye / okanye kwidatha yomfanekiso. Iimpawu zamanzi zinokwabelwana ngazo ngokupheleleyo kwi-Facebook, kwi-Instagram, kwi-Twitter, kwiAlbham yekhamera, kwibhodi eqhotyoshwayo okanye kwi-imeyile (iindlela ezintathu zokusombulula). I-Tumblr, iFlickr, iPineterest, i-Evernote, njl njl exhaswa nge-iOS 3 yokwabelana ngokwandiswa.
I-30 sec ividiyo
Nxibelelana nathi ukuba unemibuzo, ufuna ikhowudi yonyuselo okanye ufuna ukwenza udliwanondlebe lwepodcast.
Iplum emangalisayo ijolise ekwenzeni imveliso kunye nesoftware yokufota ye-OS X, iOS, Android kunye neWindows. IPlum Amazing yinkampani ebucala e-US kodwa ineeofisi kwihlabathi jikelele. Phakathi kweemveliso zabo ezidumileyo zezi I-CopyPaste®, iKey, iClock ®, iWatermark®, I-PixelStick, IncokoMaker kwaye IfotoMatte. Iplum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi ngokusetyenziswa kweselfowuni kunye nedesktop ukusukela ngo-1995.
Ngolunye ulwazi: yzzz.com